`रवि लामिछानेको द्वोष अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुन्छ भने कानुन संशोधन गरेर तेब्बर दण्ड दिइनुपर्छ' (भिडियो पनि हेर्नुहोला) - SandeshBahak
देश विचार समाचार
३० श्रावण २०७६, बिहीबार ०२:३४ August 15, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on `रवि लामिछानेको द्वोष अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुन्छ भने कानुन संशोधन गरेर तेब्बर दण्ड दिइनुपर्छ’ (भिडियो पनि हेर्नुहोला)
आज म अत्यन्तै संवेदनशिल विषयमा केही विचारहरु राख्न आइपुगको छु । हुन त केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने वातावरण अलि प्रदुषित भएकाले मैले बोल्न अलिकता कम गरेको थिए । तर, आज आजको संवेदनशिलताले फेरी पनि तानेर ल्याएको छ । मलाई विश्वास छ, तपाईलाई यी तर्कहरु युक्तिसँगत लागेको खण्डमा अवश्य लाइक र सेयर गर्नुहुनेछ:
शालिग्रामको चित्ता नचिसिदै फेरी अर्काे भिडियो सार्वजनिक भयो । अब, फेरी कुरौटीहरुले रोजगारी पाउनेभए राम्रैसँग । मैले यो विषयमा केही बोलिरहँदा केही लालबुझअक्कडहरुले मलाई रविको अन्धभक्त भन्ने भए । म अन्धभक्त होइन । म सतकर्मको समर्थक हुँ । चाहे त्यो जोसुकैले गरोस् र दुश्कर्म सावित भएछ भने सबभन्दा विरोधी म नै हुनेछु ।
म भन्छु– यदि शालिग्रामले रवि लामिछानेमाथि लगाएको आरोप अनुसन्धानबाट तथ्य सावित भएछ भने यो देशको कानुनमा भएको भन्दा दोब्बर दण्ड रवि लामिछानेलाई दिइनुपर्छ । अझ कानुन संशोधन गरेर दिनुपर्छ । किनकि यो आरोप यदि सत्य सावित भयो भने मजस्ता तीन करोड नेपालीहरुमाथि विश्वासघात गरेको ठहर हुनेछ । तर, हामी हावाको तालमा, हचुवाको तालमा कागले कान लग्यो भनेर कान छाम्नुको सट्टा कागको पछि लाग्ने कुरौटेहरुजस्तो मिथ्य आरोप कसैलाई लगाउन मिल्दैन । त्यो पनि अनुसन्धान र प्रमाणविना । जसरी नेपाल आजका ति पत्रकारले भने कि शालिग्रामलाई रवि लामिछानेले यातना दिएर आत्महत्या गराउन दुरुत्साहन भएको खुलासा भएको छ । खुलासा कसरी भयो ? के भिडियोको तथ्य बाहिर आएको छ ? के भिडियो कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने कुराको अनुसन्धान भएको छ ? अनुसन्धान गर्ने जिम्मा राज्य संयन्त्रको हो । कुनै तथाकथित पत्रकारको होइन । मान्छेको लासबाट छाक टार्न चाहने यी गिद्धहरुबारे राज्य गम्भिर हुन जरुरी छ । र, तथ्यमा केन्द्रित भएर त्यो भिडियोबारे प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी छ ।
मलाई हिजै जस्तो लाग्छ, रवि दाईको विवाहमा शालिग्रामले मलाई डोर्याएको र मलाई ग्लासमा कोल्ड ड्रिङ्ग्स खन्याएको । हिजै जस्तो लाग्छ धरान आउदा शालिग्राम मलाई भेट्न आएको अनि चिया पसलमा हामी चिया गफमा घन्टौँ विताएको । शोक त मलाई पनि थियो तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि र औपचारिकता लागि बोक्रे शोक प्रकट गर्ने र भ्युवर कमानउ चाहनेहरुको भिडदेखि विरक्तिएर मलाई आफ्नो शोक व्यक्त गर्न मन लागेन । शोकसँगै संका पनि थियो ।
सीधा कुरा जनताको सबैभन्दा निडर रिपोर्टर मेरो साथी शालिग्राम यति कायर होला र जस्ले आत्महत्या गर्न सकोस् । मैले आफ्नो शोकलाई व्यक्त गरिन । तथापि, आज यो भिडियोको नाम कमाउने प्लेटफर्म होइन । यो फेसबुक आइडी पनि मेरो होइन र मेरो कुनै युट्युब च्यानल पनि छैन । म बोल्छु केवल सत्यका निम्ति र तपाईले ममाथि गर्नुृभएको विश्वासका निम्ति । त्यसकारण आज पनि अन्धभक्त भएर होइन, नेताको तलुवा चाटेर अमृत पान गरेर आनन्द लिएने झण्डेहरुजस्तो होइन । तथ्यमा टेकेर यो भिडियोबारे केही प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी छ :
१. शालिग्रामले आफैँ स्वीकारेका छन्, उनीसँग करोडौँको सम्पत्ति छ । र, उनले मासिक एक, डेढ लाखको बण्डल भित्र्याउँथे आफ्नो कन्सल्टेन्सीको बिजनेसबाट । मासिक एक, डेढ लाखको बन्डल कमाउने मान्छे नाथे १८ हजारको नोकरी गर्न किन त्यहाँ जान्छ ?
२. आफ्नी श्रीमतीप्रति त्यतिका धेरै माया त्यो भिडियोमा प्रदर्शन गरेका छन् । त्यति धेरै प्रेम गर्ने मान्छेले अर्की युवतीसँग नाजायज सम्बन्ध कसरी स्थापित हुन्छ ?
३. उनले भिडियोमा भनेका छन्, मलाई अफिसबाटै घोक्र्याइन्थ्यो, पाट्टापिट्ट गरिन्थ्यो । तर, यो केटाकेटी पारा हो । किनकि म स्वयंम न्युज २४ को कार्यालयमा पुगेको छु । र, टिमको एकअर्काप्रतिको सदासयता स्वयं नियालेको छु, बुझेको छु, भोगेको छु । पाट्टापिट्ट पार्दै, घोक्र्याउँदै काममा लगाउँदा कसैले ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्छ ? तपाईले शालिग्राले गरेका सीधा कुरा जनतासँगका एपिसोड हेर्नुहोला । उनले एक से एक आफ्नो ज्यानसँ खेलेर बनाएका छन् । उनले ज्यानको बाजी लगाएर किन काम गरे ? अर्काे कुरा उनले किन रवि लामिछानेमाथि विभिन्न तस्कर, बालुवा व्यापारी, सिमेन्ट फ्क्ट्रीका मालिकबाट कमिसन लिएको आरोप लगाएका छन् । र भनेका छन्–कि मसँग प्रमाण थियो । प्रमाण छ, मसँग भन्ने यो कुरा सत्य मानौँ कि अन्तिम समयमा मान्छेले सत्य बोल्छ । तर, अन्तिम समयमा रवि लामिछानेले कुन कुन मितिमा को को सँग कति रकम लिए ? उनीसँग त्यत्रो प्रमाण थियो भने किन ती प्रमाणहरु सार्वजनिक गरेनन् । यदि उनले त्यो प्रमाण सार्वजनिक गरेको भए तीन करोड नेपाली उनको पक्षमा हुन्थे । तीन करोड नेपालीहरु यति काँतर त थिएनन् । त्यत्रो भ्रष्टचारको विरोधमा बोल्ने शालिग्रामले रवि लामिचाछानको भ्रष्टचारविरुद्ध नि बोल्न सकेननन् ?
अर्काे कुरा , उनले भनेका छन् मलाई फसाइदै छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ त्यसकारण म आत्महत्या गर्दैछु । सुन्नुस है, ‘मलाई फसाउने योजना छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ त्यसकारण म आत्महत्या गर्दैछु’ तपाईलाई कसैले फसाउने भन्ने आरोप लगाउनेवित्तिकै आत्महत्या गर्न सक्छ ? अनि के यो पत्याउने तर्क हो यो ? अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न,
४. रवि लामिछानेविरुद्ध भ्रष्टचारको आरोप लागेको छ । एउटा धानको भकारीमा बसिरहेको मान्छे भकारीकै नजिक बसेर भकारीकै धान आश्वधान गरिरहेको मान्छे के, खेतमा शिला खोज्न जाला ? अमेरिकाबाट त्यत्रो डलरको कमाई छाडेर फर्किएको मान्छेले, नेपालमा नेपालीहरुको विश्वास कमाएको मान्छेले ।
यद्यपि आजको मितिसम्म म अन्धभक्त छैन, रवि दाई र न्युज २४ टिभीको सत्कर्मको समर्थक हो । र, म फेरी पनि भन्छु–यदि द्वोष प्रमाणित हुन्छ भने, रवि लामिछानको द्वोष अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुन्छ भने नेपालमा भएको कानुनभन्दा दोब्बर, तेब्बर कानुन संशोधन गरेर दण्ड दिइनुपर्छ तर, हावाको भरमा, हचुवाको भरमा तर्क गरेर कसैप्रति मिथ्य आरोप प्रत्यारोपण गर्न मिल्दैन । र, अन्त्यमा यत्ति भन्न चाहन्छु– यतिबेला सबैभन्दा पीडा शलिग्रामको परिवारलाई छ । ठूलो पीडा भोगिरहेको छ । एउटा छोरो गुमाउनुको पीडा छ आमाबुवालाई, भर्खरै विवाह भएको पति गुमाउनुपरेको पीडा छ, शालिग्रामकी श्रीमतीलाई । त्यसकारण म यत्तिमात्र निवदेन गर्न चाहन्छु कि सबै मिडिया र सम्बन्धित पक्षसँग–कसैको मृत्युमथि यसरी राजनीति नगरौँ । कसैको मृत्युलाई छाक टार्ने बहाना नबनाऔँ, यसले हाम्रो समाजलाई सही बाटोतर्फ लैजादैन । र, लाशबाट छाक टार्ने यी गिद्धहरु जो आफूलाई तथाकथित पत्रकार भन्छन्, यिनीहरुविरुद्ध राज्य गम्भिर हुन जरुरी छ ।
दुर्गन्धित सामाजिक सञ्जाल : ठीक/बेठीक छुट्याउन गाह्रो
३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १८:५९ August 16, 2019 Sandesh Bahak